Anisan’ny nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra, omaly teny Iavoloha ny fanendrena tompon’andraikim-panjakana ambony. Anisan’izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Varotra ; ny Asam-panjakana ; ny eo anivon’ny Tontolo iainana. Manampy ireo ny minisitera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny solika.
Hihazo ny any Korea Atsimo ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice sy ny minisitry ny Vola, Rakotomanana Gervais. Voalazan’ny filankevitry ny minisitra fa fitsidihana arahana atrikasa izao ataon’izy ireo any, manomboka ny 21 jolay izao.
Hiverina ho avy eto amintsika indray, ny sekretera jeneralin’ny Frankofonia, Michaelle Jean. Fitsidihana faharoa ataony eto amintsika izao ary tafiditra amin’ny fanomanana sy fikarakarana ny handraisantsika ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia hatao eto amintsika ny volana novambra izao.